22 Feb 2018 . 6:32 PM
29$ ရှိယုံနဲ့ အရှေ့တိုင်း တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယအစားအစာတွေ၊ အနောက်တိုင်း European အစားအစာတွေ၊ Cake တွေ၊ Dessert တွေနဲ့ အမိုက်တကာ့အမိုက်ဆုံး ရှားပါးပင်လယ်စာတွေကို ကင်လိုက်၊ ပေါင်းလိုက်၊ အရသာအစုံချက်ထားတာတွေကိုမှ အဝစား ဘူဖေးစနစ်နဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အဆင့်မြင့် Hotel ကြီးမှာ စားခွင့်ရနိုင်နေပြီဆိုတာ Akhayar ရဲ့ အစားချစ်သူတို့ သိပြီးကြပြီလား?
Seafood Buffet တွေထဲမှာ အစောဆုံး ခင်းကျင်းရောင်းချခဲ့တဲ့ ParkRoyal Hotel ကြီးက ဒီတစ်ခါလည်း လူတိုင်းစားနိုင်မယ့် ဈေးနှုန်းနဲ့ အတန်ဆုံး Seafood Buffet Market ကို ချပြလိုက်ပြီဆိုတော့ အစားချစ်သူတို့ လက်မနှေးရအောင် Akhayar က အရင်တပတ်ပိတ်ရက်တုန်းက သွားခဲ့စားခဲ့သမျှ အထွေထွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါပြီ။
ရေဘဝဲ၊ ဂုံး၊ ပုစွန် ပင်လယ်စာမျိုးစုံ။
Seafood Buffet Market ကို အပတ်တိုင်းရဲ့ တနင်္ဂနွေ၊ တနင်္လာ၊ အင်္ဂါနဲ့ ကြာသပတေးနေ့တွေမှာ ညနေ 6:00 မှ 9:30 ထိ ခင်းကျင်းတည်ခင်းပြီး Tax ပါအပြီးအစီးမှ 29$ ဆိုတော့ အံ့မခန်းဈေးနှုန်းပါပဲ။
ကြိုတင် Reserve လေးတော့ ယူရပါတယ်။ ပထမဆုံး ပြောချင်တာက Five Star Hotel တစ်ခုအနေနဲ့ ဒီဈေးနှုန်းနဲ့ ဒီလို Buffet ဟာ တန်လွန်းတယ်လို့ ဆိုနိုင်တာပါ။
အပြင်အဆင်အနေနဲ့ဆို ဝင်ဝင်ချင်းအဝမှာတင် သူ့အခင်းအကျင်းကို တွေ့နိုင်ပြီး ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ ၂ယောက်စာဝိုင်း၊ မိသားစုဝိုင်းစသဖြင့် စားပွဲလေးတွေခင်းကျင်းထားပါတယ်။
ပုစွန်အမျိုးအစားစုံ၊ ခရု၊ ကမာ၊ ဂုံးနဲ့ ကဏန်း။
အလယ်ဗဟိုမှာတော့ ပုစွန်၊ ဂုံး၊ ကမာ၊ ရေဘဝဲ၊ ပြည်ကြီးငါးအစုံကို ပေါင်းထားတဲ့ ဗန်းကြီးတွေရေခဲနဲ့အပြည့်ဖြည့်ထားပြီး တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာလည်း ပင်လယ်စာအသုပ်တွေအစုံ အလျှံပါယ်သုပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။
Tuna၊ Salmon နဲ့ ပင်လယ်စာ အသားငါးအစိမ်း လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကင်စား၊ ပေါင်းစားလို့ရပါတယ်။
သဘာဝအရသာ အသားချိုချိုလေးကို ကြိုက်သူတွေအတွက် ဒီနေရာမှာ ကြိုက်သလောက်သာထည့်ပါ။ ဒီတစ်နေရာကတော့ Main ပါပဲ။
Salad တွေ ကိုယ့်ဘာသာလုပ်လို့ရတယ်။
တစ်ဖက်ခြမ်း Chef Kitchen ဘက်မှာတော့ အစိမ်းခင်းကျင်းထားတဲ့ Tuna၊ Salmon နဲ့ တခြား အဆီနှစ်ပြည့်ပန်းကဏန်းတွေ၊ ရှားရှားပါးပါး အသားငါးပင်လယ်စာတွေ အစုံရပြီး ကြော်ကြော်၊ ကင်ကင် ကြိုက်သလို Chef တွေကို ချက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ ဒီ၂နေရာနဲ့တင် 29$ က မက်မက်စက်စက် ပေးပျော်နေပါပြီ။
Seafood Market ဆိုပေမယ့် Seafood တင်မဟုတ်ဘဲ တခြား ဟင်းလျာတွေအနေနဲ့ အရသာ တော်တော်ကောင်းမွန်တဲ့ Indian အစားအစာတွေ၊ မြန်မာထမင်းနဲ့ အသီးအရွက် မျိုးစုံကြော် ချက်ထားတဲ့အိုးတွေ အစီရီ။
ဟင်းအမယ်အစုံ၊ အိုးတွေနဲ့ ထည့်ပေးထားတယ်။
စီချွမ်နဲ့ မြေထဲပင်လယ်အရသာဟင်းချိုတွေ၊ Sauce မျိုးစုံနဲ့ Salad တွေ၊ ထူးထူးခြားခြား အသီး၊ အသား ကြိုက်တာနဲ့ တွဲဖက်စားလို့ရတဲ့ Cheese အတုံးကြီးတွေ နဲ့ Pizza တွေ စုံလင်နေအောင် ပါဝင်ပါတယ်။
Chef made ခေါက်ဆွဲသားအမျိုးမျိုးနဲ့ Spaghetti အစုံ ရပါသေးတယ်။
နောက်ထပ် အမိုက်ဆုံးက 29$ နဲ့ ရောင်းချပေမယ့် ဟင်းလျာအမယ်ခင်းကျင်းမှုမှာ မခိုကပ်ထားဘဲ Italian Pasta နဲ့ Spaghetti တွေကို အရသာမျိုးစုံနဲ့ စိတ်ကြိုက် ပြင်ဆင်ပေးနေတာတွေပါပဲ။ တော်ရုံ Restaurant လောက်က အရသာတွေထက်အများကြီး Recommand ပေးပါတယ်။ Seafood Cabonara ကတော့ ကိုယ့်အကြိုက် ရှယ်ပါပဲ။
ဒီမှာတင် ကိုယ်သုံးလိုက်ရတဲ့ 29$ တန်နေပြီဆို မှားသွားဦးမှာပါ။ ညစာအတွက် ကြိုက်သလောက် အဝစားသောက်ပြီးပြီဆို အချိုပွဲအတွက် Cake အရသာ ၅မျိုးထက်မနည်း၊ ဂျယ်လီကျောက်ကျော၊ သစ်သီးအရသာစုံ၊ ရေခဲမုန့်၊ Tea နဲ့ အလျှံပါယ်သော အချိုပွဲတွေက မစားဘဲ မနေနိုင်အောင် လက်ယပ်ခေါ်နေမှာနော်။ တခြား ရေနဲ့ အအေးကလည်း Free Flow ပါပဲတဲ့။
ဒီလောက်ပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းပမာဏနဲ့ ဒီလို Hotel ကြီး တစ်ခုမှာ ဒီလို အရသာဟင်းလျာအစုံအလင်အပြင်၊ ပင်လယ်စာလတ်လတ်ဆတ်ဆတ်ကြီးတွေစားရတာ တကယ့် Amazing ပါ။ Dinner အတွက် လုံးဝ သင့်တော်တဲ့နေရာတစ်ခုပါ။
အဆင်မပြေတာလေးအနေနဲ့ဆို ပင်လယ်စာဟင်းလျာအားလုံးစုံလင်သလောက် Sauce လေးတွေပါ ပိုစုံစေချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး လူများလာရင် ဝန်ထမ်းလေးတွေပါ အလုပ်များတတ်တော့ တစ်ခုခုလိုအပ်ရင် ခေါ်ရတာလေးတစ်ခုပါပဲ။ ကျန်တာကတော့ အလျဉ်းသင့်သလို လိုအပ်တာ လာလာဖြည့်ပေးတတ်ပါတယ်။ Juice တွေကကျန်တာအားလုံး ပြောစရာမရှိအောင် ပြည့်စုံပါတယ်။
သတိပြုရမှာက ParkRoyal ရဲ့ Spice Brasserie Restaurant မှာ Buffet Dinner အနေနဲ့ ပုံမှန် ခင်းကျင်းတဲ့ Seafood Buffet Harvest နဲ့ ခု ထပ်မံ ခင်းကျင်းတဲ့ Seafood Buffet Market ဆိုပြီး ၂မျိုးရှိပြီး Seafood Buffet Harvest မှာ Beer Freeflow နဲ့ ပင်လယ်စာကြီး အစုံ ပါဝင်ပေမယ့် ခု ခင်းကျင်းတဲ့ 29$ တန် Seafood Buffet Market မှာတော့ ပုံမှန် ပင်လယ်စာတွေ စုံစုံလင်လင်ပါလာပါတယ်။
အစားအသောက်မီးလိုတောက်တဲ့သူတွေ၊ ပင်လယ်စာဆို တထိုင်တည်း ဝင်သမျှအပီသွင်းနိုင်တဲ့ သူတွေအတွက်တော့ ၂ခါ တွေဝေမနေဘဲ သွားကိုစားသင့်တဲ့ Buffet ပါ။ မြန်မာငွေကျပ် ၃သောင်းကျော်နဲ့ ပုံမှန်ပင်လယ်စာဆိုင်တွေမှာ ရောင်းချတဲ့ ဟင်းတပွဲစာထက် ဒီလို Hotel ကြီးက Buffet က ပိုတန်တယ်ခံစားမိစေပါတယ်။
အရသာရှိ၊ အမျိုးအစားစုံ ပင်လယ်စာသုပ်တွေရ
တစ်ခါတစ်လေ အလုပ်ပင်ပန်းလွန်းလာရင်၊ စိတ်ဖိအားများလာရင်၊ ကိုယ့်အတွက် ဒီလိုအဆင့်မြင့်နေရာမျိုး Hotel မျိုးမှာ Buffet ကောင်းကောင်းလေးကျွေးပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြန်ဆုချဖို့ အသင့်တော်ဆုံးလို့ Akhayar ရဲ့ အစားချစ်သူများကို အကြံပြုလိုက်ပါရစေနော်။
29$ နဲ့ ကြိုက်ရာအဝစားBuffet စနစ်ပါ။
လိပ်စာကတော့ အမှတ် ၃၃၊ အလံပြဘုရားလမ်း၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့ပါ။ ကြိုတင်စာရင်းသွင်းချင်ရင်တော့ +951250388 ext.8121 နဲ့ 8122 ကိုဆက်ပြီး Booking တင်လို့ရပါပြီ။
Five Star Hotel ကွီးရဲ့ လူတိုငျးစားနိုငျမယျ့ဈေးနဲ့ အမိုကျစား Seafood Buffet
29$ ရှိယုံနဲ့ အရှတေို့ငျး တရုတျနဲ့ အိန်ဒိယအစားအစာတှေ၊ အနောကျတိုငျး European အစားအစာတှေ၊ Cake တှေ၊ Dessert တှနေဲ့ အမိုကျတကာ့အမိုကျဆုံး ရှားပါးပငျလယျစာတှကေို ကငျလိုကျ၊ ပေါငျးလိုကျ၊ အရသာအစုံခကျြထားတာတှကေိုမှ အဝစား ဘူဖေးစနဈနဲ့ ရနျကုနျမွို့ရဲ့ အဆငျ့မွငျ့ Hotel ကွီးမှာ စားခှငျ့ရနိုငျနပွေီဆိုတာ Akhayar ရဲ့ အစားခဈြသူတို့ သိပွီးကွပွီလား?
Seafood Buffet တှထေဲမှာ အစောဆုံး ခငျးကငျြးရောငျးခခြဲ့တဲ့ ParkRoyal Hotel ကွီးက ဒီတဈခါလညျး လူတိုငျးစားနိုငျမယျ့ ဈေးနှုနျးနဲ့ အတနျဆုံး Seafood Buffet Market ကို ခပြွလိုကျပွီဆိုတော့ အစားခဈြသူတို့ လကျမနှေးရအောငျ Akhayar က အရငျတပတျပိတျရကျတုနျးက သှားခဲ့စားခဲ့သမြှ အထှထှေကေို တငျပွပေးလိုကျပါပွီ။
ရဘေဝဲ၊ ဂုံး၊ ပုစှနျ ပငျလယျစာမြိုးစုံ။
Seafood Buffet Market ကို အပတျတိုငျးရဲ့ တနင်ျဂနှေ၊ တနင်ျလာ၊ အင်ျဂါနဲ့ ကွာသပတေးနတှေ့မှော ညနေ 6:00 မှ 9:30 ထိ ခငျးကငျြးတညျခငျးပွီး Tax ပါအပွီးအစီးမှ 29$ ဆိုတော့ အံ့မခနျးဈေးနှုနျးပါပဲ။
ကွိုတငျ Reserve လေးတော့ ယူရပါတယျ။ ပထမဆုံး ပွောခငျြတာက Five Star Hotel တဈခုအနနေဲ့ ဒီဈေးနှုနျးနဲ့ ဒီလို Buffet ဟာ တနျလှနျးတယျလို့ ဆိုနိုငျတာပါ။
အပွငျအဆငျအနနေဲ့ဆို ဝငျဝငျခငျြးအဝမှာတငျ သူ့အခငျးအကငျြးကို တှနေို့ငျပွီး ဘယျဘကျအခွမျးမှာ ၂ယောကျစာဝိုငျး၊ မိသားစုဝိုငျးစသဖွငျ့ စားပှဲလေးတှခေငျးကငျြးထားပါတယျ။
ပုစှနျအမြိုးအစားစုံ၊ ခရု၊ ကမာ၊ ဂုံးနဲ့ ကဏနျး။
အလယျဗဟိုမှာတော့ ပုစှနျ၊ ဂုံး၊ ကမာ၊ ရဘေဝဲ၊ ပွညျကွီးငါးအစုံကို ပေါငျးထားတဲ့ ဗနျးကွီးတှရေခေဲနဲ့အပွညျ့ဖွညျ့ထားပွီး တဈဖကျတဈခကျြစီမှာလညျး ပငျလယျစာအသုပျတှအေစုံ အလြှံပါယျသုပျထားတာတှရေ့ပါတယျ။
Tuna၊ Salmon နဲ့ ပငျလယျစာ အသားငါးအစိမျး လတျလတျဆတျဆတျကငျစား၊ ပေါငျးစားလို့ရပါတယျ။
သဘာဝအရသာ အသားခြိုခြိုလေးကို ကွိုကျသူတှအေတှကျ ဒီနရောမှာ ကွိုကျသလောကျသာထညျ့ပါ။ ဒီတဈနရောကတော့ Main ပါပဲ။
Salad တှေ ကိုယျ့ဘာသာလုပျလို့ရတယျ။
တဈဖကျခွမျး Chef Kitchen ဘကျမှာတော့ အစိမျးခငျးကငျြးထားတဲ့ Tuna၊ Salmon နဲ့ တခွား အဆီနှဈပွညျ့ပနျးကဏနျးတှေ၊ ရှားရှားပါးပါး အသားငါးပငျလယျစာတှေ အစုံရပွီး ကွျောကွျော၊ ကငျကငျ ကွိုကျသလို Chef တှကေို ခကျြခိုငျးလို့ရပါတယျ။ ဒီ၂နရောနဲ့တငျ 29$ က မကျမကျစကျစကျ ပေးပြျောနပေါပွီ။
Seafood Market ဆိုပမေယျ့ Seafood တငျမဟုတျဘဲ တခွား ဟငျးလြာတှအေနနေဲ့ အရသာ တျောတျောကောငျးမှနျတဲ့ Indian အစားအစာတှေ၊ မွနျမာထမငျးနဲ့ အသီးအရှကျ မြိုးစုံကွျော ခကျြထားတဲ့အိုးတှေ အစီရီ။
ဟငျးအမယျအစုံ၊ အိုးတှနေဲ့ ထညျ့ပေးထားတယျ။
စီခြှမျနဲ့ မွထေဲပငျလယျအရသာဟငျးခြိုတှေ၊ Sauce မြိုးစုံနဲ့ Salad တှေ၊ ထူးထူးခွားခွား အသီး၊ အသား ကွိုကျတာနဲ့ တှဲဖကျစားလို့ရတဲ့ Cheese အတုံးကွီးတှေ နဲ့ Pizza တှေ စုံလငျနအေောငျ ပါဝငျပါတယျ။
Chef made ခေါကျဆှဲသားအမြိုးမြိုးနဲ့ Spaghetti အစုံ ရပါသေးတယျ။
နောကျထပျ အမိုကျဆုံးက 29$ နဲ့ ရောငျးခပြမေယျ့ ဟငျးလြာအမယျခငျးကငျြးမှုမှာ မခိုကပျထားဘဲ Italian Pasta နဲ့ Spaghetti တှကေို အရသာမြိုးစုံနဲ့ စိတျကွိုကျ ပွငျဆငျပေးနတောတှပေါပဲ။ တျောရုံ Restaurant လောကျက အရသာတှထေကျအမြားကွီး Recommand ပေးပါတယျ။ Seafood Cabonara ကတော့ ကိုယျ့အကွိုကျ ရှယျပါပဲ။
ဒီမှာတငျ ကိုယျသုံးလိုကျရတဲ့ 29$ တနျနပွေီဆို မှားသှားဦးမှာပါ။ ညစာအတှကျ ကွိုကျသလောကျ အဝစားသောကျပွီးပွီဆို အခြိုပှဲအတှကျ Cake အရသာ ၅မြိုးထကျမနညျး၊ ဂယျြလီကြောကျကြော၊ သဈသီးအရသာစုံ၊ ရခေဲမုနျ့၊ Tea နဲ့ အလြှံပါယျသော အခြိုပှဲတှကေ မစားဘဲ မနနေိုငျအောငျ လကျယပျချေါနမှောနျော။ တခွား ရနေဲ့ အအေးကလညျး Free Flow ပါပဲတဲ့။
ဒီလောကျပေးရတဲ့ဈေးနှုနျးပမာဏနဲ့ ဒီလို Hotel ကွီး တဈခုမှာ ဒီလို အရသာဟငျးလြာအစုံအလငျအပွငျ၊ ပငျလယျစာလတျလတျဆတျဆတျကွီးတှစေားရတာ တကယျ့ Amazing ပါ။ Dinner အတှကျ လုံးဝ သငျ့တျောတဲ့နရောတဈခုပါ။
အဆငျမပွတောလေးအနနေဲ့ဆို ပငျလယျစာဟငျးလြာအားလုံးစုံလငျသလောကျ Sauce လေးတှပေါ ပိုစုံစခေငျြပါတယျ။ နောကျပွီး လူမြားလာရငျ ဝနျထမျးလေးတှပေါ အလုပျမြားတတျတော့ တဈခုခုလိုအပျရငျ ချေါရတာလေးတဈခုပါပဲ။ ကနျြတာကတော့ အလဉျြးသငျ့သလို လိုအပျတာ လာလာဖွညျ့ပေးတတျပါတယျ။ Juice တှကေကနျြတာအားလုံး ပွောစရာမရှိအောငျ ပွညျ့စုံပါတယျ။
သတိပွုရမှာက ParkRoyal ရဲ့ Spice Brasserie Restaurant မှာ Buffet Dinner အနနေဲ့ ပုံမှနျ ခငျးကငျြးတဲ့ Seafood Buffet Harvest နဲ့ ခု ထပျမံ ခငျးကငျြးတဲ့ Seafood Buffet Market ဆိုပွီး ၂မြိုးရှိပွီး Seafood Buffet Harvest မှာ Beer Freeflow နဲ့ ပငျလယျစာကွီး အစုံ ပါဝငျပမေယျ့ ခု ခငျးကငျြးတဲ့ 29$ တနျ Seafood Buffet Market မှာတော့ ပုံမှနျ ပငျလယျစာတှေ စုံစုံလငျလငျပါလာပါတယျ။
အစားအသောကျမီးလိုတောကျတဲ့သူတှေ၊ ပငျလယျစာဆို တထိုငျတညျး ဝငျသမြှအပီသှငျးနိုငျတဲ့ သူတှအေတှကျတော့ ၂ခါ တှဝေမေနဘေဲ သှားကိုစားသငျ့တဲ့ Buffet ပါ။ မွနျမာငှကေပျြ ၃သောငျးကြျောနဲ့ ပုံမှနျပငျလယျစာဆိုငျတှမှော ရောငျးခတြဲ့ ဟငျးတပှဲစာထကျ ဒီလို Hotel ကွီးက Buffet က ပိုတနျတယျခံစားမိစပေါတယျ။
အရသာရှိ၊ အမြိုးအစားစုံ ပငျလယျစာသုပျတှရေ
တဈခါတဈလေ အလုပျပငျပနျးလှနျးလာရငျ၊ စိတျဖိအားမြားလာရငျ၊ ကိုယျ့အတှကျ ဒီလိုအဆငျ့မွငျ့နရောမြိုး Hotel မြိုးမှာ Buffet ကောငျးကောငျးလေးကြှေးပွီး ကိုယျ့ကိုကိုယျပွနျဆုခဖြို့ အသငျ့တျောဆုံးလို့ Akhayar ရဲ့ အစားခဈြသူမြားကို အကွံပွုလိုကျပါရစနေျော။
29$ နဲ့ ကွိုကျရာအဝစားBuffet စနဈပါ။
လိပျစာကတော့ အမှတျ ၃၃၊ အလံပွဘုရားလမျး၊ ဒဂုံမွို့နယျ၊ ရနျကုနျမွို့ပါ။ ကွိုတငျစာရငျးသှငျးခငျြရငျတော့ +951250388 ext.8121 နဲ့ 8122 ကိုဆကျပွီး Booking တငျလို့ရပါပွီ။
Ei Ei Khine Minn